ERDOGAN: Daacish waa Virus khatar ku ah Muslimiinta – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa si adag u cambaareeyay ururka Daacish,waxa uuna ku tilmaamay Virus khatar ah oo kala jarjaraya ummadda Islaamka.
Erdogan waxa uu hadalkan ak sheegay shir jaraa’id oo ay wada jir u qabteen isaga iyo madaxweynaha Ciraaq Fu’aad Macsuum oo booqasho ku jooga Turkiga.
Erdogan, waxa uu yiri “ Daacish waxay dhibaato ku yihiin qof kasta oo muslim ah, marka Daacish laga takhalusana waxaa soo bixi doona kooxo kale oo argagixiso oo wata magacyo kale”.
Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in duqeymaha dhinaca circa ah ee Isbahaysigu ku hayaan Daacish aysan ku guuleysan doonin in laga adkaado kooxda oo gacanta ku haysa dhul ballaaran oo ka tirsan Ciraaq iyo Suuriya, isagoo intaas ku daray in loo baahan yahay howl gal ciidan oo dhinaca dhulka ah.
Waxa uu Sheegay Erdogan in dowladda Turkigu ay diyaar u tahay in ay ka qeyb qaadato howl galkaas, iyadoo tababarro siineysa isla markaana hubeyneysa ciidanka Ciraaq.
Dowladda Turkigu kama qeyb gelin dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda Ciraaq iyo Suuriya oo ay labadaba xuduud la wadaagto, hase yeeshee waxay ciidammo xoog badan oo tubtay xadduudka iyadoo sheegtay in ay tallaabo qaadi doonto haddii ay Daacish dalkeeda u soo tallaabaan.
Shir looga hadlayo xuquuqul Insaanka Afrika oo lagu soo bandhigay tacaddiyada Soomaaliya "Sawirro"